Waxyaabihii laga bartay kulankii EPL ee kooxaha Aston Villa iyo Chelsea… (Pato iyo Pedro oo rikoorro cusub dhigay) – Gool FM
>- Villa ayaa khasaartay ama guuldarro ay ku dhacday todoba kulan oo isku xiga Premier League markii saddexaad tan iyo bilowgii sanadka 2015.
>- Chelsea ayaan laga adkaan 15 kulan oo horyaalka ah, waana guuldarro la’aantoodii ugu dheereed kana badan koox waliba oo Premier League ka ciyaarta xilli ciyaareedkan.
>- Matt Miazga ayaa kulankiisii ugu horreeyey Premier League u saftay Chelsea, waxaana uu noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey ee u dhashay Mareykanka oo u ciyaara koox ka dheesha horyaalka Premier League.
>- Alexandre Pato ayaa kulankiisii ugu horreeyey Premier League gool dhaliyey, ciyaaryahankii ugu dambeeyey ee Chelsea gool u dhaliya kulankiisa ugu horreeya sidaan oo kale waxa uu ahaa Pedro oo 23-kii bishii Agoosto 2015 kulankiisii ugu horreeyey gool ka dhaliyey kooxda West Bromwich Albion.
>- Ruben Loftus-Cheek oo jira 20-sano iyo 70 maalmood ayaa noqday gooldhaliyihii ugu da’da yaraa ee u dhashay England oo Chelsea gool ugu dhaliya Premier League tan iyo Glen Johnson oo isagoo jira 19-sano iyo 252 maalmood gool u dhaliyey kooxdiisa kana dhaliyey 1 bishii May sanadkii 2004-tii naadiga Southampton.
>- Pedro ayaa labo gool u dhaliyey kooxdiisa markii labaad xilli ciyaareedkan Premier League, kaddib markii sidaan oo kale uu labo gool ka dhaliyey Newcastle 13 bishii Febraayo 2016, ciyaar ay Blues ku adkaatay 5-1.
>- Pedro hadda waxa uu dhaliyey 5 gool oo Premier League ah xilli ciyaareedkan, Diego Costa oo 11 gool dhaliyey ayaa ah ciyaaryahanka kaliya ee Chelsea oo ka goolal badan.
>- Alexandre Pato ayaa noqday ciyaaryahankii 11-aad ee reer Brazil oo u ciyaara kulan Premier League ah kooxda Chelsea, waxaana ay saddex dheer yihiin kooxaha kale taariikhda Premier League.
>- Pato ayaa noqday ciyaaryahankii lixaad ee Brazil u dhashay oo gool dhaliya kulankiisa ugu horreeya Premer League, horay waxaa sidaas u sameeyey xiddigaha reer Brazil ee Geovanni, Robinho, Gilberto, Ilan iyo Willian.
>- Villa ayaa laga badiyey 10 kulan oo ay ku ciyaartay garoonkeeda, waxaana ay barbareeyeen rikoorka 10 guuldarro ee kooxdan hal xilli ciyaareed ku soo gaartay garoonkeeda, waana xilli ciyaareedkii 2013-14.